TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE 9.6.3.01 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.6.3.01 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE
TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အသိပေးနေဖို့နှင့် TopBuzz နှင့်အတူဧည့်ခံ။
က buzzing ရဲ့လျှင်, ငါတို့သည်ဖုံးအုပ်ပါတယ်။ TopBuzz ယုံကြည်စိတ်ချဒေသခံအမျိုးသားရေးနှင့်ကမ္ဘာကြီးသတင်းဆိုင်များတွင်အနေဖြင့်အကြီးမားဆုံးခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်တို့ကိုစုဝေးစေနှင့် All-In-One brainy AI အ-powered app ကိုသို့သူတို့ကိုငါ pack မှာ။ ဒါဟာကျနော်တို့သင်ရုံသင်တို့အဘို့ကိုယ်ပိုင် feed ကိုအတွက်ဂရုစိုက်သတင်းနှင့်အကြောင်းအရာများကယ်နှုတ်တော်မူပုံကိုပါပဲ။ ဒါဟာသမိုင်း-အောင်အားကစားဖြစ်ရပ်များနိုင်ငံရေး, သတင်း, ငါတို့ In-depth ကိုအထူးလွှမ်းခြုံကဏ္ဍများနှင့်အတူအခြားအယိအကြောင်းအရာများမှကြွလာသောအခါအပြည့်အဝပုံပြင်ကိုရယူပါ။
သင့်ရဲ့ "သင်သည်" ချန်နယ်ရုံသင်တို့အဘို့, ကောင်းစွာနေသူများကဖန်တီး။ ထိပ်တန်းဆင့်သတင်းဆိုင်များတွင်ထံမှသတင်း (CNN က, NYTimes, AP, etc) ကိုချိုးဖောက်နှင့်ညာဘက်သင်၏ကိုယ်ပိုင် feed ကိုမှရယ်စရာဗီဒီယိုများတူသောအကြောင်းအရာယိ Get ။
နက်ရှိုင်းသောလူတိုင်းငါတို့လက်ရွေးချယ်ကဏ္ဍများအတွက်အကြောင်းကို buzzing ရဲ့သောပုံပြင်များနှင့်အကြောင်းအရာများသို့ငုပ်။ ဤသည်နိုင်ငံရေး, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကောလိပ်အားကစားပါဝင်သည်။ အဖွဲ့ Go!
အခြား app ကိုဖွင့်လှစ်ရန်မလိုဘဲအသစ်ကသင့်ရဲ့ဇာတိမြို့အတူတက်ထားပါ။ ကရာသီဥတု, ရာဇဝတ်မှု, သင်၏ဒေသတွင်မဆိုအခြားကြီးမားသောပုံပြင်မှကြွလာသောအခါနောက်ဆုံးပေါ်ကျုံးကိုငါသိ၏။
CNN က, The New York Times, ရိုက်တာသတင်းဌာန, USA Today, Bloomberg သတင်းဌာန, အချိန်, TechCrunch, BuzzFeed, Vox, Daily Mail က, HuffPost, NowThis သတင်းနှင့်ပိုပြီး။
သိမှတ်အတွက် Be, အခုတော့
အဖြစ်မကြာမီသူတို့ထုတ်ဝေနေတဲ့အဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ်ဒေသခံအမျိုးသားရေးနှင့်ကမ္ဘာကြီးသတင်းခံစားပါ။ အဆိုပါ app ကိုဖွင့်လှစ်ချက်ချင်း update လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ feed ကိုအပေါ်ကိုဆင်းပွတ်ဆွဲ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသတိပေးချက်အရဖြစ်စေ။
ထိပ်တန်းပုံပြင်များ, U.S သတင်းများ, ဗီဒီယိုများ, GIF များ, Funny, ဒေသခံ, Entertainment က, အားကစား, ကမ္ဘာ့, နိုင်ငံရေး, သိပ္ပံ, ကျန်းမာရေး, Tech မှ, စီးပွားရေး, ကားများ, ဖက်ရှင်, အစားအစာ, လူနေမှုပုံစံ, ဂိမ်း, ခရီးသွား, နှင့်ယဉ်ကျေးမှု။
TopBuzzers ကအကြောင်းပြောနေတာပါလိမ့်မည်တဲ့ထိတ်လန်အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိမယ့်လျှင်အရူး Kardashian ပါသို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲ buzzing Cardi ခနှင့်အတူဟောလိဝုဒ်အတွက်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြ၏။
ဗီဒီယို Channel ကို
Hard-နှိပ်သတင်းကနေအနားယူ ယူ. ပျော်စရာတစ်ခုခုတွေ့မြင်, အံ့သြဖွယ်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုချန်နယ်တစ်နေရာတည်းအတွက်အကောင်းဆုံးရေပန်းစားဗီဒီယိုများတတ်၏။
ထိပ်တန်းထုတ်ဝေသူများ များ၏တန်ချိန် Follow
နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီတောင်ပိုင်းနေထိုင်မှု, အရသာရှိတဲ့, Saveur, အစားအစာနှင့်ဝိုင်, Esquire, လူတွေက Entertainment ကအပတ်စဉ်, ငွေ, Fortune မဂ္ဂဇင်း, အချိန်က The Young ကတူရကီ, ဒေသခံကွန်ယက် Affiliates, USA Today, အားကစား Illustrator, အဆောက်အဦးအပြင်ဘဝက, ခရီးသွား + Leisure, လမ်းမကြီး & track, လူကြိုက်များသောမက္ကင်းနစ်, နယူးသိပ္ပံပညာရှင်ပြီးအများကြီးပို။
Block ကို trolls
သငျသညျထိန်းချုပ်နေ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကပိတ်ဆို့ခြင်း feature ကိုနှောင့်အယှက်မှတ်ချက်များကောငျးကြိုးအတှကျသွား, သို့မဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဆုံးဖြတ်သည်အထိစေသည်။
အကောင်းဆုံးသတင်း App ကို သာ. ကောင်း၏ လာ
သတိရပါပိုငျသညျ TopBuzz ပိုကောင်းကြောင့်ရရှိသွားတဲ့ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ "Follow" ချန်နယ်သွားနေဖြင့် Start နှငျ့သငျထဲသို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရွေးပါ။ သင်မကြိုက်ဘူးအကြောင်းအရာမြင်သောအခါဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ကို " ... " အစက်ကိုထိပုတ်ပါနဲ့စာရေးသူပိတ်ဆို့, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာမျိုးကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဤသည်ကိုအသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုသိစေပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တောင်မှပိုမြန်သင့်ရဲ့ feed ကိုပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်။
+ အကြာတွင်ဖတ်ရှုဖို့ဆောင်းပါးများကို Save
+ လူမှုရေးမီဒီယာနှင့် SMS ကိုတဆင့်မျှဝေပါ
+ Block ကိုစာရေးဆရာများနှင့်ကြေညာသူ
+ သငျသညျကိုစိတ်ဝင်စားနေလိုင်းများ Add
+ သင်တို့တွင်လျော့နည်းမြင်ချင်သောအကြောင်းအရာများကိုအစီရင်ခံခြင်းအားဖြင့်သင့် feed ကို Enhance
ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားနာကိုချစ်။ feedback@topbuzzapp.com: ရန်သင့်အကြံပြုချက်များ, မေးခွန်းများကို, ဒါမှမဟုတ်ချီးမွမ်း Email ။
ကျနော်တို့တချို့အေးမြပစ္စည်းပစ္စယဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာရန်နှင့်သူငယ်ချင်းများ၏ဖြစ်ပါစေနှင့်အတူ TopBuzzers တက်ချိတ်လို။
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/TopBuzzApp
YouTube ကို: https://www.youtube.com/c/TopBuzzApp
TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE အား အခ်က္ျပပါ
one-for-all စတိုး 431 731.98k
TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.6.3.01
ထုတ်လုပ်သူ Bytedance Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.topbuzz.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: 00:A5:84:E3:75:B5:57:3C:89:E1:F0:6F:5C:F6:0D:0D:65:DD:B6:32
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Micro Cao
အဖွဲ့အစည်း (O): ByteDance
TopBuzz News: Breaking, Local, Entertaining & FREE APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ